Angovo azo avy amin'ny masoandro Photovoltaic, ny mpitarika eo amin'ireo havaozina | Fanavaozana maintso
Angovo azo avy amin'ny masoandro Photovoltaic, ny mpitondra eo amin'ireo havaozina
Raha ny filazan'ny Tale Jeneralin'ny International Energy Agency (IEA), Fatih Birol: Solar photovoltaic no voalohany loharanon'ny angovo vaovao nitombo Haingankaingana tamin'ny 2016. Ny masoivoho dia namaritra ny angon-drakitra ho "vaovao tsara".
Amin'ny fandefasana ny tatitra isan-taona Azo havaozina 2017, Birol dia nanipika fa "rehefa avy nanombatombana ny karazan-tsolika rehetra - solika, lasantsy, arina, fanavaozana - ary ny vokany eo amin'ny tsenan'ny angovo, ilay nifantoka tamin'ny fampisehoana azo havaozina vaovao tsara ho an'ny indostria".
1 Angovo avy amin'ny masoandro
4 Solar panne izay miasa amin'ny insolation ambany
4.1 Fitaovana vaovao izay mahazaka tara-masoandro be dia be
Ny fanadihadiana natao tamin'ny 2016 dia nanambara fa nitombo 50% ny fahafaha-miasa amin'ny masoandro vaovao (photovoltaic) ary i Shina no firenena nanankinana ny antsasaky ny fahaiza-manaony. fanitarana manerantany. "Ao ambadiky ny tantaran'ny fahombiazan'ny fanavaozana dia ahitantsika mpamily roa lehibe: fanohanana matanjaka ny politikan'ny governemanta sy ny fanatsarana ny teknolojia," hoy ny mpitantana.
Rehefa namoaka ireo hevi-dehibe ao amin'ilay lahatsoratra i Birol, dia nanasongadina ny hafainganan'ny fitomboan'ny angovo avy amin'ny masoandro tamin'ny herintaona, izay sambany nihoatra ny fitomboan'ny loharano angovo hafa.
Araka ny tatitra, ny fanavaozana dia mitentina efa ho roa ampahatelon'ny fahafahan'ny angovo vaovao manerantany tamin'ny taon-dasa, sahabo ho 165 gigawatts, ary hitohy hisy fiantraikany mahery vaika mandritra ny taona maro. Ny lahatsoratra dia nandrasana ny fiakaran'ny herin'ny herinaratra 2022% alohan'ny 43.
Raha ny marina, angovo avy amin'ny masoandro, izay nanjary mora vidy kokoa tamin'ny taon-dasa mihoatra ny 75%, dia efa mora vidy kokoa noho ny karazana angovo hafa vokarina amin'ny arintany, solika na gazy.
Ny rafitra angovo misy rafitra goavambe amin'ny fampiasam-bola dia amina taona maro andrasana, na dia am-polotaona maro aza. Izany no iray amin'ireo antony miadana ny fandraisana ny fanavaozana: raha vao natsangana ny orinasa nokleary, gazy, arina (na karazana hafa), dia tsy azo atao ny manidy azy mandra-pahatapitry ny androm-piainany mahasoa. Raha izany dia ara-dalàna ny famatsiam-bola dia tsy ho azo averina, izay tsy hitranga noho ny lobby lehibe any.
Nahita fomba izy ireo hiteraka herinaratra amin'ny vidin'ny fifaninanana sy amin'ny fomba azo havaozina tanteraka.
Solar panne izay miasa amin'ny insolation ambany
Ny angovo avy amin'ny masoandro dia nanana fihenan-danja lehibe foana: ny habetsaky ny taratra masoandro sy ny toetr'andro. Amin'ny andro misy rivotra be, rahona, orana na zavona, be ny habetsaky ny taratra masoandro mamely ny tontolon'ny masoandro. Noho izany, ny habetsaky ny angovo ahafahan'ny tontolon'ny masoandro mamokatra dia kely kokoa. Miteraka tsy filaminana eo amin'ny famatsiana herinaratra izany.
Ny tanjona dia ny hahafahana mampitombo ny fahombiazan'ny fiovam-po mivantana mandra-pahitanao taratra masoandro bebe kokoa ary hiteraka angovo ampy, na dia toetr'andro ataovy ambany ny famirapiratana.
Fitaovana vaovao izay mahazaka tara-masoandro be dia be
Ny fitaovana mahazaka tara-pahazavana be dia be dia lelafo LPP (ho an'ny fanafohezana azy amin'ny teny anglisy "phosphore maharitra") ary afaka mitahiry angovo avy amin'ny masoandro mandritra ny andro ka angonina amin'ny alina.
Jiro kely azo jerena ihany no azo alaina sy avadika ho herinaratra, fa ny LPP Izy io dia afaka mitahiry angovo avy amin'ny hazavana tsy misy volo sy akaiky infrared. Izany hoe, fitaovana afaka mandray hazavana amina fiparitahana lehibe kokoa toy ny infrared.
Tsaroantsika fa ny marin'ny spektrum elektromagnetika hitan'ny olombelona dia ny faritra hita maso. Na izany aza, misy karazana taratra maro amin'ny halavan'ny halavana sy ny hamafiny toy ny taratra infrared.
Noho ireo takelaka ireo dia misy angovo be dia be azo tehirizina tsy avy amin'ny tara-pahazavana mivantana fotsiny, fa ny faritra hafa amin'ny fikajiana elektrômanetika koa azo ovaina ho angovo elektrika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Angovo azo avy amin'ny masoandro Photovoltaic, ny mpitondra eo amin'ireo havaozina
Ny azontsika antenaina amin'ny herin'ny rivotra
Sina no mitarika ny fandrosoan'ny angovo azo havaozina manerantany